Tsiba Ingxowa, Ingxowa yokuSusa inkunkuma, Ingxowa yenkunkuma yaseGadini - iBAOTE
Umatshini wombhobho odibeneyo
Nkqo Raidial Bidirection extruder umbhobho umatshini
Umatshini weembotyi ezibanzi
Ibhegi yokuhlamba ikhonkrithi
IQELA LE-BAOTE LOKWENZIWA KOMSEBENZI elikwi “peninsula” entle eQingdao City yase China lishishini lesizwe elitsha kunye nobuchwephesha obuzuze ilifa lesiko kunye nokulandela ubuchule. Iqela le-BAOTE linamasebe amancinci amathathu ajolise kumacandelo eshishini ahlukeneyo.
Okokuqala ziimveliso zentsimbi-Zonke iindidi zebhawodi esemgangathweni kunye nengaxakekanga, amandongomane, isher washer, izikrufu kunye nemigqomo yentsimbi yenkunkuma, isikhongozeli sentsimbi esikumgangatho weBAOTE Industrial Manufacturing Co ,. LTD
Okwesibini iingxowa zeplastiki-Zonke iintlobo zebhegi yokutsiba, ibhegi yokumpompoza ikhonkrithi, ibhegi yokususa iasbestos, iphegi enkulu Zonke ziveliswe yiNkokeli yeNyaniso yePlastiki.
Okwesithathu Qingdao Rainbow Tech Co., Ltd, nto leyo Precast eziphathekayo eziphathekayo oomatshini kunye nomthengisi ngomatshini Plastic. Imveliso ibandakanya ukungcangcazela Umatshini wokwenza umbhobho wekhonkrithi ngo-2005 kwaye uvelise ngempumelelo umatshini wokuqala wombhobho we-extrusion extrusion ngo-2012. Umgca weCrete Concrete Cylinder Pipe (PCCP) ukwakwindawo.
Iinkcukacha zolondolozo kunye nolondolozo lweekheji
Umbuzo 1: Singakunciphisa njani ukunxiba kwe-cage welder? 1. Kuqhelekile ukuba abavelisi bomatshini wokufaka iweldi banxibe iinxalenye ngexesha lokusetyenziswa. Ukunciphisa ukunxiba phakathi kweendawo, kufuneka sihlawule ...
Iindlela zokunciphisa ukusetyenziswa kweengxowa zeplastiki
Phinda usebenzise iingxowa zeplastiki: khetha iiplastikhi ezimbalwa ezomeleleyo kwaye uziphathe ezijikeleze ebhegini yakho ukuze ube nokuthenga ngeebhegi zakho endaweni yevenkile oyinikeze ezivenkileni. Iingxowa zeplastiki ezinokuphinda zisebenze kulula ukuziphatha ...
Ukwenza indlela Hook kunye bopha
Icandelo lezobugcisa: Ukuyilwa kunxulumene ne-hook-kunye-loop edibanisa ubuncinci iinxalenye ezimbini, ezinje ngeharness nelungu langaphambili. Ngasemva: I-hook-and-buckle luhlobo lomtya, umtya, i ...
Imveliso yamva nje
Sinike i-imeyile yakho kwaye uza kuhlaziywa mihla le ngeziganeko zamva nje, ngokweenkcukacha!
Iibholithi zokuhamba, Ulwakhiwo lweBolts, U Iibholiti, Iibhola zeLag, I-Hex Bolts, Nkqo Pipe Machine Machine,